ဝမ်းချုပ်ခြင်းဆိုတာ​​​​လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်က နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံတွေမတူညီတဲ့ အတွက် တစ်နေ့ကို ဘယ်နှကြိမ် ဝမ်းသွားမှ ပုံမှန်ဆိုတာတော့ ပြောဖို့အလွန်ခက်ပါတယ်။ ဝမ်းချုပ်ခြင်းက အစာအိမ်စနစ်ကို ခက်ခဲစေပါတယ်။ ဝမ်းချုပ်ခြင်းကြောင့် အစာအိမ်နာကျင်တာ အူလမ်းကြောင်းညစ်အားနာကျင်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
** ဝမ်းချုပ်ခြင်း (၂)မျိုး ရှိပါတယ်။ နာတာရှည် ဝမ်းချုပ်ခြင်းနှင့် ရိုးရိုးတစ်ခါတစ်လေမှ ဝမ်းချုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ **
နာတာရှည်ဝမ်းချုပ်ခြင်းက ရက်သတ္တပတ် (သို့မဟုတ်) အမြဲတမ်းလိုလို ဝမ်းသွားရခက်ခဲခြင်း (သို့မဟုတ်)ဒီထက်ပိုပြီး အူလှုပ်ရှားမှုနည်းခြင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ နာတာရှည် ဝမ်းချုပ်ခြင်းက ဝမ်းသွားနိုင်ဖို့ အလွန်အမင်း ညစ်ရခြင်း နှင့် အခြားလက္ခဏာများစွာ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။
​ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ပတ်ကို (၃)ကြိမ်အောက်ဝမ်းသွားခြင်းကို ဝမ်းချုပ်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ အညစ်အကြေးတွေက အစာအိမ်လမ်းကြောင်း တစ်လျှောက် တဖြည်းဖြည်းခြောက်သွေ့မာကြောလာခြင်းကြောင့်ဝမ်းချုပ်ခြင်းတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
-အစာအိမ်ဟောင်းကင်ဆာ။ စတာတွေကြောင့်လည်း ဝမ်းချုပ်စေပါတယ်
ဘယ်​လို ကာကွယ်​ သင့်​လဲ?
ဝမ်းချုပ်တဲ့လူတွေ အနေနဲ့ ကိုယ်ရဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံကို ပြောင်းပါ။
အမျှင်ဓာတ်ပါဝင်မှုများတဲ့ အစားအစာ(အစေ့အဆံများ ၊ ထောပတ်သီး ၊ ပဲအမျိုးမျိုး ၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း) စတာတွေကို များများစားသုံး ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကို တတ်နိုင်သလောက် များများလုပ်ပေးပါ။
ဝမ်းသွားချင်တဲ့ အချိန်တွေမှာ ချုပ်မထားဘဲ ချက်ချင်း သွားပါ။
မနက်အိပ်ရာက ထထချင်း ​ရေ​သောက်​​ပေးပါ
တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး ရေ(၂)လီတာ သောက်ပေးပါ။(credit)
👉👉ဝမ်းချုပ်​ ၊ ဝမ်းခိုင်​​နေသူများအတွက်​ အိမ်​တိုင်း ​ဆောင်​ထားသင့်​သည့်​လက်​​တွေ့ ​ဆေး….ဖြစ်​ပါတယ်​။👈👈
​ဆေးတစ်​ဖုံတွင်​ ပါဝင်​​သော ပစ္စည်းများ….
၁။ ရှား​စောင်း ၂၁ကျပ်​သား
၂။ အ​စေ့လွတ်​မန်​ကျည်းသီး ၅၀ကျပ်​သား
၄။ ဆား​လှော်​ ၃ကျပ်​သား
​ဆေးချိန်​= ၁၀၀ကျပ်​သား (၁ ပိသာ )
ဝမ်းတွင်းမှ အပူပုပ်​ ကင်းစင်​ခြင်း
•မလိုအပ်​​သော အဆီ/ကိုယ်​လတ်​စ​​ရော ​လျော့ချ​ပေးခြင်း
•ကင်​ဆာ ကို ကာကွယ်​ ​ပေးခြင်း
• အဖု၊ အကြိတ်​ အနာများ ကာကွယ်​ ခြင်း
စ​သော….​ရောဂါ များအတွက်​ အလွန်​အသုံးဝင်​​သော ​ဆေး ဖြစ်​ပါသည်​။
​•• ​ဆေးအရသာ=== ချို၊ ချဉ်​ အရသာ..
ာင်​​စေး (ချွဲပျစ်​)​နေ​အောင်​ ထိုးပါ ။ အ​အေးခံ၍ ဖန်​ပုလင်းသို့ ​လေ​လုံ ​အောင်​ထား ပြီး ​ဆောင်​ထားပါ။ ညအိပ်​ရာ ဝင်​တိုင်း လက်​ဖတ်​စားဇွန်းဖြင့်​
လူကြီး (၁)ဇွန်း၊ မှ (၂)ဇွန်း
က​လေး (၁/၂)ဇွန်း(ဇွန်းတစ်​ဝက်​)၊ စားသွားပါ။